१. टोक्यो स्टक एक्सचेन्जमा सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा आएर बुधबार कारोबार रोकिएको छ । अन्य स्टक एक्सचेन्जहरुमा निकेको २२५ रहेको छ । यो अवस्था अमेरिकी कांग्रेसमा फेडरल रिजर्बका प्रमुख जेरम पवेलको स्पष्टीकरणको अघिल्लो दिन देखिएको हो ।
२.अमेरिकाले रणनीतिक महत्वका जलमार्गहरुमा बहुपक्षीय छलफलबाट एउटा समीकरण स्थापना गर्न खोजीरहेको छ । विशेष गरेर भूमध्येपूर्वका जलमार्गहरुमा देखिएका रणनीतिक कठिनाईहरुका कारण अमेरिकाले यसो गर्न लागेको हो ।
३. चीन–अमेरिका व्यापार युद्धका कारण चिनियाँ उत्पादनहरुले ठूलो आघात खेपीरहेका छन् । तैपनि चिनियाँ वस्तुको बजार मूल्यमा परिवर्तन गरिएको छैन । चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको दौरानमा विशेष गरेर चिनियाँ वस्तु अमेरिकी बजारमा बिक्रिवितरणका लागि निर्वाध रुपमा पाइरहेका सुविधाहरु अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयले रोकिएका छन् ।
४. थाईल्याण्डमा नागरिक सरकारका लागि सहुलियत परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । त्यहाँ सेनाद्वारा सरकारको नेतृत्व भईरहेको छ र आधारभूत कानून ‘मार्सल ल’ बाट निर्देशित भइरहेका छन् । यसबीच दुईहजार भन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जब सन् २०१४ मा बर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुत चन ओचाले सत्ता कू गरेर शक्ति हासिल गरे त्यसयता राजकीय शक्तिका सबै निकायहरु सैन्य मुख्यालयबाटै परिचालित भइरहेका छन् ।
५. संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका उच्च व्यापार मध्यस्थकर्ताबीच मङ्गलबार टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । दुबै मुलुकबीच विश्वासको वातावरण रहेको घोषणा गरेको करिब एक हप्तापछि नै व्यापार युद्धको चित्तबुझ्दो समाधानका लागि वार्ताको पहल शुरु भएको हो ।
६. पपुवा न्यूगिनीमा आदिवासी समुदायबीच परस्पर भड्किएको हिंसाका कारण २४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकाहरुमा दुईजना गर्भवती समेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हिंसामा ठूलो संख्यामा आदिवासी समुदायका मानिसहरुको हत्या भएपछि प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पपुवा न्यूगिनीको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको हेला प्रान्तमा आदिवासी समुदायहरुबीच सदियौंदेखि हिंसात्मक झडप भइरहेका छन् । हेला प्रान्तमा विगत तीन दिनदेखि आदिवासी समुदायबीच हिंसात्मक झडप भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । हेला प्रान्तीय प्रशासक विलियम बान्डोले २४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी भइसकेको र घटनामा अरु व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको हुनसक्ने बताए ।
घटनास्थल पुगेका प्रहरी र अरु सुरक्षा अधिकारीले पछिल्लो स्थितिको जानकारी गराउन बाँकी रहेकाले यसपटकको हिंसात्मक झडपमा मृत्यु हुनेको संख्या अरु बढ्न सक्ने बान्डोले बताए ।
७. अल्जेरियाले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) कार्यक्रमलाई औपचारिक रुपमा अनुमोदन गरेको छ । अल्जेरियाको एपीएस समाचार संस्थाका
अनुसार उत्तर अफ्रिकी मुलुक अल्जेरिया गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सहभागी भएको थियो । बिआरआई सम्बन्धी सहमतिपत्रमा अल्जेरियाका अन्तरिम राष्ट्रपति अब्देलकादेर
बेनसलाहले हस्ताक्षर गरेको र त्यसलाई सरकारी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
८. विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको यमनको राजधानी सानास्थित एक अदालतले साउदी गठबन्धनका निम्ति जासुसी गरेको आरोपमा ३० जनालाई मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ ।
मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरुमा इस्लाहा पार्टीसँग आबद्ध रहेका प्राज्ञहरु, प्राध्यापकहरु र विद्यार्थी रहेका छन् । यमनमा यो समूहलाई मुस्लिम
ब्रदरहुडको नामले चिनिन्छ । यी व्यक्तिलाई सन् २०१६ मा हुथी विद्रोहीको सुरक्षा अभियानका क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । नाम नबताउने शर्तमा एक अधिकारीले अदालतको आदेशका विरुद्ध अपिल गरिने जानकारी दिए । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले अदालतको आदेश ‘कानुनको उपहास’ भएको जनाउँदै गिरफ्तारीमा परेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न हुथी विद्रोहीसँग आग्रह गरेको छ ।
९.सिरियाको पूर्वी क्षेत्रमा बारुदी सुरुङ बिस्फोट हुँदा मंगलबार कम्तीमा सात जना बालबालिकाको मृत्यु भएको सिरियाली सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ । डायर
अल–जउर प्रान्तको पूर्वमा रहेको डब्लान नगरमा उक्त घटना भएको हो । टेलिभिजनले सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त बारुदी सुरुङ आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटले बेबारिसे अवस्थामा छाडेको जनाएको छ ।
इस्लामिक स्टेट समूह परास्त भएका सिरियाका धेरै भूभागमा बेबारिसे बारुदी सुरुङ, ग्रिनेड र बम भेटिने गरेका छन् ।
यी बिस्फोटक पदार्थमा परेर सर्वसाधारणको नियमित झैं ज्यान गइरहेका खबर दिनहुँ आउने गरेको पनि टेलिभिजनले उल्लेख गरेको छ ।
१०. अर्जेन्टिनाका पूर्व राष्ट्रपति फर्नान्डो डे ला रुअको मंगलबार मुटु तथा मृगौला रोगका कारण ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । स्वास्थ्य अवस्था नाजुक
भएपछि उनलाई ब्यूनस आयर्सस्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति मौरिसियो म्याक्रीले वरिष्ट राजनीतिक फर्नान्डोको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
युरोपेली उत्पादनमा अमेरिकाको कर वृद्धि
मिस्टर बिनका छोरा गोर्खा सैनिकमा भर्ती
रेलको भाडा वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि ...